Ebe na Olee mgbe Ndị VIP kacha elu na ahịa njem njem ụwa na-ezukọ n'ezie?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ebe na Olee mgbe Ndị VIP kacha elu na ahịa njem njem ụwa na-ezukọ n'ezie?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • WTN
Ọnụ ego nke WTTC Cocktail
WTTC Cocktail na Chesterfield Mayfair dị na London bụ mmemme pụrụ iche maka ndị VIP kacha elu na njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ. N'abalị a, Nọvemba 2 bụ oge mbụ ndị isi nwere ike ịhụ ibe ha n'onwe - ma ọ juru n'ọnụ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Chesterfield Mayfair dị na London abụrụla ebe ihe karịrị afọ 20 maka ndị isi njem nleta iji zute maka WTTC Cocktail na mgbede nke abụọ nke ahịa njem njem ụwa.
Abalị a bụ abalị, mgbe afọ 2 gachara, mgbe ndị isi njem nlegharị anya nwere ike gbakọta ọnụ, chefuo ihe mkpuchi, wee nweta.
Anita Mendiratta nọchitere anya UNWTO. Onye odeakwụkwọ ukwu anọghị ya.
Ruo ihe karịrị afọ 20, ọbụbụenyi na azụmahịa malitere ma ọ bụ gaa n'ihu na ụlọ oriri na ọṅụṅụ 5-star dị nso na Greenfield na London, Chesterfield Mayfair Hotel.
The Kọmitii Njem andwa na njem nlegharị anyaN'afọ ọ bụla n'oge Ahịa Njem Ụwa na-akpọ ndị òtù, ndị ozi, na ndị VIP ndị ọzọ ka ha bịa na họtel maka mmanya, champagne, na nri nri.
Ọ bụ otu n'ime mmemme a na-achọkarị n'akụkụ ahịa njem njem ụwa.
Ihe omume a n'abalị a bụ nnukwu ohere maka onye isi WTTC ọhụrụ Julia Simpson, iji gwa ndị otu, ndị ozi na ndị ọbịa okwu. O were n'isi nke nzukọ a na-anọchi anya 200 nke nnukwu azụmahịa na njem na njem nlegharị anya.
Ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya sitere na Jọdan, Barbados, Jamaica, na Philippines so na ndị ọbịa ahụ.
Philippines ga-abụ ndị ọbịa nke Mgbakọ WTTC na-esote na 2022.
Juergen Steinmetz, onye mbipụta eTurboNews na Onye isi oche WTN, gara mmemme a wee were obere vidiyo a:
Njem nlegharị anya bụ maka ndị mmadụ, kamakwa maka azụmahịa - ọ na-egosikwa na mmanya WTTC a.
Ndị otu Fai Mission ekwu, sị:
November 3, 2021 na 10: 41
M na-aga n'ihu na-anụ na ndị na-eweta ngwaahịa na-ewe iwe na arịrịọ ndụmọdụ ka ha "VIP" ndị ahịa ha na-enwetaghị nkọwa ọ bụla na ihe ga-eme n'ezie. Usoro ihe ngosi njem & ihe nlegharị anya bụ ohere ịre ahịa njem a nwalere oge na nke a na-akwanyere ùgwù. Bulie ika gị na ihe ngosi njem anyị!